Buyekeza: 'Ukugxekwa kanye neziKronike ngeMfihlo kaPuente Viejo' | Izincwadi Zamanje
Ukubuyekezwa: 'Ukugxekwa nemibhalo mayelana neMfihlo kaPuente Viejo'
Ukugxekwa nemibhalo mayelana neMfihlo kaPuente Viejo yincwadi eshicilelwe ngo Izinhlelo ze-Altera kuphi UJose Ignacio Salazar Carlos de Vergara, intatheli kanye nomsakazi odumile waseSan Sebastián, udiliza futhi ahlaziye izahluko zalolu chungechunge oluyimpumelelo olubekwe ekuqaleni kwekhulu lama-3 i-Antena 2011 eselikusakaze kusukela ngoFebhuwari XNUMX.
Kule ncwadi, uJosé Ignacio Salazar uqoqa ezinye ze- izindatshana zephephandaba eshicilelwe kubhulogi yakhe futhi ihlaziya izenzo, izimo kanye nokuziphatha kwempilo kanye nokushisekela kwabantu abahlala kuleli dolobha elincane laseSpain lapho konke kungenzeka khona. Ngakho-ke, akuyona inoveli uqobo ethuthukisa isakhiwo sochungechunge noma ingxenye yaso, kepha iqoqo lezindatshana ezihleliwe lapho umbhali akhombisa khona umbono wakhe nombono wakhe.
"UJosé Ignacio Salazar ubhekele ekuhlaziyweni okuningiliziwe komsebenzi okwenziwa ngabantu abangaphezu kwekhulu nsuku zonke"bathi UMiquel Peidro y U-Aurora Guerra, umbhali wombhalo wochungechunge, esanduleleni sencwadi. Futhi bayanezela: "Oqotho, oqondile futhi ongathandeki, ubuhle obukhulu bokuphawula kwakhe ukuthi akekho umuntu ongenandaba."
I-Los abalandeli be-The Secret of Puente Viejo Kule ncwadi uzothola ukufundwa okuhle kakhulu ukuze ufinyelele ezansi kubalingiswa, uhlangane nabalingisi ababadlalayo bese ucwaninga ngolwazi lwesikhathi esivele sikude kakhulu, kepha lokho kushiye uphawu lwalo emlandweni nethonya lalo ngokoqobo.
Incwadi iqala ngo Isandulelo ophethe ababhali besikripthi salolu chungechunge, njengoba besivele siphawule. Ngemuva kwalokho i- isingeniso Kubandakanya ukwethulwa kombhali nezizathu eziqinisekisa ukwenziwa kwale ncwadi, kanye nezahluko eziningana ezikhuluma ngezinto ezijwayelekile zalolu chungechunge nakubalingisi nabalingisi ababambe iqhaza ochungechungeni. Kufanele kuqhakanjiswe ithoni yomuntu siqu nesiphatho sikaJosé Ignacio Salazar kwesinye salezi zahluko, ngobude obuhlukene, nalapho ukubandakanyeka ngqo anakho nabantu akhuluma ngabo kungabongwa khona.
Isigaba esilandelayo siqoqa okungcono kakhulu izindatshana ibhalwe nguJosé Ignacio Salazar kubhulogi yakhe, zonke zinezihloko eziyela ngasocansini, ezenza umfundi akhumbule futhi akhumbule izigcawu ezihlangabezane nalolu chungechunge. Ngaphandle kokuthi uSalazar akalufakanga usuku lokushicilelwa kombhalo wokuqala kubhulogi. Abaningi bazophinde baphuthelwe ukuthi le ncwadi ayifaki izithombe ezivela ochungechungeni, ekwenza kokuthunyelwe kubhulogi. Noma kunjalo, lokhu akukwazanga ngezizathu zamalungelo ezithombe. Kunoma ikuphi, imibhalo ikhethwa ngempumelelo enkulu, futhi ibhalwe ngendlela yomuntu uqobo yale ntatheli ecinephile kanye ne-erudite, ekhombisa ukuthi wazi kahle kangakanani ukungena nokuphuma kwale ndaba ehehayo.
Siqoqa ikhophi ethi 'Ukugxekwa kanye nemilando ngemfihlo kaPuente Viejo'
Ngokuzithoba kwe Izinhlelo ze-Altera, sinekhophi ye- Ukugxekwa nemibhalo mayelana neMfihlo kaPuente Viejo nguJosé Ignacio Salazar ukudweba.
Okwesibili, mane uthumele i-tweet usebenzisa i-hashtag #ALiteraturaPuenteViejo noma usebenzisa inkinobho elandelayo.
Tweet # ALiteraturaPuenteViejo
Umdwebo uzovulwa kuze kube ngoLwesithathu, Disemba 10, 2014, ngo-23: 59 pm Ngakusasa, yenza i-raffle. Umnqobi wencwadi izoshicilelwa kulokhu okuthunyelwe futhi sizoxhumana naye ukuze sikuthumelele ikhophi yamahhala ngokuphelele Ukugxekwa nemibhalo mayelana neMfihlo kaPuente Viejo. Kubalulekile ukuthi owinile aphendule umlayezo wokuthi sizomthumelela ngasese nge-Twitter kungakapheli izinsuku eziyi-15 kuqedwe.
Ingabe ufuna ikhophi lezibuyekezo kanye neziKronike mayelana no-El Secreto de Puente Viejo noma uzinike othile ongumlandeli wochungechunge? Ungaphuthelwa bese ubamba iqhaza. Unenhlanhla!
Sesivele sinomnqobi wencwadi ethi raffle.
Unenhlanhla kube nguVero @ vventur2 (Barcelona).
!! Halala !! Sizokuthinta ukuze sikuthumele ikhophi yakho ye- Ukugxekwa kanye nemibhalo egciniwe emlandweni Imfihlo kaPuente Viejo.
Kubo bonke abanye, siyabonga ngokubamba iqhaza.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ukubuyekezwa: 'Ukugxekwa nemibhalo mayelana neMfihlo kaPuente Viejo'
Impumelelo enesifiso sencwadi ethi "Destroy this diary" ebhalwe nguKeri Smith